कलियुगका कुरा: एक किन्दा दुई फ्री भनेको त सर्ट किन्दा टाई फ्री...
अहिले बेलायत आएपछि पो थाहा भयो ती विचरा भारतीय भाइले नि त्यस्तो काइदा त लन्डनबाटै आयात गरेका छन्। हिजो बाटोमा घुम्दै गर्दा एउटा पसलाँ एउटा किन्दा दुईटा फ्री लेखेको देखें। ल अब खैरेको देशबाट केही लानै परो सक्कली माल एउटा सर्ट किनेर दुईटा सर्ट भनेर छिरेको त। एउटा सर्टलाई नेपाली सात हजार जति हालेमा दुईटा टाई फ्री मा भनेको रहेछ। चित्राँ देखाउँदा त सर्ट नै दुईटा फ्री भने झैं मान्याथें।
आफूलाई के को टाइ चाहिनु... बिहेमा लाको एउटा टाइ त अहिलेसम्म फेरि प्रयोग गर्न पर्ंयाछैन।
inashrestha April 16, 2011 at 3:11 AM
त्यस्तै रहर ला भे लौ अर्को बे अरम्न त भनुम् भने घरकीले मार्लिन फेरि ! अब छोछोरीको बे'मा धोको पुग्ने अरी १-२ हप्तै लाउनुनी नफुकालिकन दिपकजी ।
Nepal April 16, 2011 at 4:47 AM
होईन भारतीयले मात्र कपि गर्छन भन्ने छ र ? वेलायतकाले पो कपि गरेका हुन की गज्जवको आईदिया थानेर
Aakar April 16, 2011 at 5:19 PM
टाई हाम्लाई गिफ्ट दे भो नि त ! हाम्रा बिहेमा काम लाग्छ ! :)